नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा गरिब राष्ट्र- योगदान गर्ने हाम्रा नेतालाई अभिनन्दनगर्ने कि? ~ Khabardari.com
नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा गरिब राष्ट्र- योगदान गर्ने हाम्रा नेतालाई अभिनन्दनगर्ने कि?
4:00 PM Admin No comments
यो साता बहसमा रहेको भुतपूर्वहरुको सुबिधामा अरबौं राज्यकोस खर्च, भुकम्प पिडितको जाडोमा मारिरहेको तथ्य अनि भुकम्प पिडितका नाममा भएको भ्रस्टाचार , प्रचण्ड , गृह मन्त्रीका छोरि नातिनी भुकम्प पिडित बनेर चाइना गएको तथ्य , एमाले नेताहरुलाई राज्य लक्ष्मीले दिएको मोटोघुस र अख्तियारले छानबिनगर्न पत्र काटेका नेता, दलहरु अक्तियार प्रमुखलाइ उल्टै महा अभियोग लगाउन तम्सिनु बर्तमान नेपालका प्रतिबम्ब हुन् ।
देशको कहाली लाग्दो यो खबर नागरिक दैनिकबाट लिइएको छ विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपाल दक्षिण एसियामा तेस्रो गरिब मुलुक थियो। बंगलादेश र भारतलाई उछिनेर देशले गरिबीमा निराशाजनक स्थिति सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको अर्थविदहरुको भनाइ छ।
भारतले लगाएको नाकाबन्दी र लम्बिँदो तराई–मधेस बन्दले गरिबी दर तीव्र रुपले बढिरहेको जनाउँदै अर्थविदहरुले नेपाल अब दक्षिण एसियाकै गरिब मुलुक बन्ने खतरा औंल्याएका छन्। भूकम्पको तान्डबबाट तंग्रिन नपाउँदै सुरु भएको तराई–मधेस हडताल र भारतले लगाएको नाकाबन्दीले हजारौंको रोजगारी खोसिँदा यस्तो अवस्था आएको